प्रकाशित मिति: मंगलबार, आश्विन १९, २०७८ समय: १६:०७:०७
क’ठै छोरीले थाम्न सकिनन आँसु । बाबा फिर्ता आइदिनु भनिन । श्रीमतीलाई त घृ’णा गर्थे तर यति सानी छोरिको के दो’ष ? किन सोचेनन उनले आफ्नो सन्तानको बारेमा ? सम्बन्धित निकायको यो विषयमा ध्यान जाओस ।बाकी हेर्नुहोस तल को भिडियोमा
Last Updated on: October 5th, 2021 at 4:07 pm